Mushonga wemazino Industry - China Shandong Yulong Cellulose
Mushonga wemazino Industry CMC rinoshandiswa sezvo thickening chirungiso mu mushonga wemazino kudzivirira yakasimba-mura kupatsanurwa mushonga wemazino, izvo zvinoita mushonga wemazino ane mumwe viscosity uye kusachinja-chinja uye namatidza riri kumeso uye yakaisvonaka, uye anovandudza zvakabikwa mushonga wemazino. In mushonga wemazino, akasiyana-siyana yomunyu electrolytes zvinowa- akawedzera, uye munyu kubvumirawo zvimwe CMC anogona zvinobudirira kutadzisa electrolyte kubva kukuvadza ari namatidza viscosity, rive dete uye yakasimba-mvura kuparadzana. CMC ane pseudop yakanaka ...
CMC rinoshandiswa sezvo thickening chirungiso mu mushonga wemazino kudzivirira yakasimba-mura kupatsanurwa mushonga wemazino, izvo zvinoita mushonga wemazino ane mumwe viscosity uye kusachinja-chinja uye namatidza riri kumeso uye yakaisvonaka, uye anovandudza zvakabikwa mushonga wemazino.
CMC ane pseudoplastic zvakanaka kuti zvinobatsira kuvandudza kugadzirwa kunyatsoshanda kuti mushonga wemazino. Zviri nyore kuti nepavaigona kubuda kana ukashandisa.
The mhando mushonga wemazino maindasitiri: TM9, TH9, TH10 uye TVH9